သွေးအေးလွန်းတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအတွေးအခေါ် - For her Myanmar
သွေးအေးလွန်းတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအတွေးအခေါ်
သူတွေးတဲ့ အတွေးနဲ့ သူပြောတဲ့စကားတွေကြောင့် ကိုယ်ပါသူ့ဂိုဏ်းဝင်ချင်သွားသောအခါ…
ယောင်းတို့ရေ.. ဟိုးတစ်ခေါက်က အက်ဒ်မင် ကမ္ဘာ့အချောဆုံး လူသတ်သမားများဆိုပြီး Video လေးလုပ်ထားတာ ကြည့်လိုက်ရလား? မကြည့်ရသေးရင် ဒီမှာ ကြည့်နော်… အဲဒီထဲမှာ အက်ဒ်မင်က စိတ်ဝင်စားစရာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ယောင်းတို့ရဲ့.. လူသတ်သမားများ ဘာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လဲတော့ အပြောမစောနဲ့ ယောင်းရေ.. စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေကို အက်ဒ်မင်ပြောပြမယ် 😉
သူ့နာမည်ကိုတော့ Charles Manson လို့ခေါ်ပါတယ်။ Charles Manson ကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ခပ်ချောချော၊ ခပ်မိုက်မိုက် ဘဲလေးပေါ့… ကမ္ဘာ့ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး လူသတ်သမားစာရင်းထဲတောင် ပါသေး… သူက တခြားလူသတ်သမားတွေလို မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့အစား တခြားလူတွေက သတ်ပေးတာတဲ့ ယောင်းတိုရဲ့… သတ်ပေးဆို သူက ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကိုး ဟီးဟီး.. သူ့ဂိုဏ်းသားတွေ သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ လူတွေများလွန်းတာမို့ နောက်ဆုံး ရလဒ်က သူ ထောင်ထဲမှာ တစ်သက်စာ နေလိုက်ရတာပါကွယ်.. သူ့ဂိုဏ်းနာမည်ကိုတော့ Manson Family Cult (မန်ဆန်မိသားစု ဂိုဏ်း) လို့ခေါ်ပါတယ်.. သူ့ဂိုဏ်းသားတွေနဲ့အတူ သေစေလောက်တဲ့ ကမ်းပိန်းတွေလည်း အများကြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း သူက ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းမှာ သိပ်ကို နာမည်ကျော်ကြား ထင်ရှားခဲ့တာပေါ့။
The Family ( Manson Family Cult) မှာတော့ ချားလ်စ်မန်ဆန်ရဲ့ နောက်လိုက်ပေါင်း ၁၀၀ကျော် ရှိပါတယ်။ ချားလ်စ် မန်ဆန်ရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘဝနေနည်းပုံစံတွေ၊ စွဲလမ်းမူးယစ်ပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့ ဆေးသုံးစွဲမှုတွေကို အားလုံးလိုက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ ဒီလူတွေထဲမှာ မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ မန်ဆန်ကို ယေရှုဖြစ်တယ်၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ ခြွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်လက်ခံထားကြပြီး သူပြောတဲ့စကားကို ဗျာဒိတ်တွေလို၊ အမိန့်တစ်ခုလို ရိုရိုကျိုးကျိုး နာခံကြတာပါ။
ဒီမိသားစုလို့ခေါ်ရမယ့် ဂိုဏ်းဟာ လူသတ်မှုပေါင်း ၃၅ခုလောက်ကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူသတ်မှုတွေကို ဘယ်တုန်းကမှဖော်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ သဲလွန်စမကျန်တာက တစ်ကြောင်း၊ အဲ့လို သတ်လိုက်တာတွေကို မန်ဆန်က သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ ဖြေရှင်းလိုက်တာက တစ်ကြောင်းပေါ့လေ.. သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး သားကောင်ဖြစ်သွားသူတွေကတော့ သူတို့ဟာ မန်ဆန်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံးအသတ်ခံလိုက်ရတာပါ။ တကယ့်လူသတ်မှုထဲမှာ ချားလ်စ် မန်ဆန်က ထဲထဲဝင်ဝင်မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့နောက်လိုက်တွေကို တွေ့သမျှလူ အကုန်သတ်ဆိုတဲ့ အမိန့်နဲ့ ခိုင်းစေလိုက်တာပါတဲ့။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကို ဒီက စပြောရမယ် ယောင်းတို့ရေ… စောစောက အက်ဒ်မင်ပြောခဲ့သမျှ ချားလ်စ် မန်ဆန်ရဲ့ အကြောင်းတွေက ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ် ထင်ရတယ်ဟုတ်? ဥပမာ သူက ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တို့ ဘာတို့လေ.. အဲ့တော့ ဒီအကောင်ကြီးက ရူးနေတဲ့ကောင်ကြီးလားပေါ့.. အက်ဒ်မင်တို့ဆီမှာလည်း ဒါမျိုးက ရှိတယ်မလား.. (ပြောတော့ ပြောရဲပါဘူး 😀 တို့မထိရဲပု 😛 ) ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အပြောအဆိုတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ အဓိပ္ပာယ်ရှိလွန်လွန်းလို့ ပါးစပ်ပါ အဟောင်းသားဖြစ်ရတယ် ယောင်းတို့ရေ.. အဲ့လိုတွေထဲကမှ အက်ဒ်မင်သဘောကျတဲ့ သူပြောသွားတဲ့ စကားလေးတွေကို ပြောပြမယ်နော်… တကယ်လို့များသာ ယောင်းက သူ့ရှေ့မှာ သူပြောတာတွေ ထိုင်နားထောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းလည်း သူ့ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်သွားမှာပါတဲ့.. အင်းပေါ့လေ.. ဒါကြောင့်လည်း နောက်လိုက်တွေ များတာပေါ့။ အက်ဒ်မင်တောင် သူ့အတွေးလေးတွေ သဘောကျချင်ချင်…
Related Article >>> လူသတ်မှုအပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လျော်ကြေးအဖြစ်ပေးရတဲ့ Pashtun လူမျိုးစု
၁။ မင်းတို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ် ကြည့်ကြတာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ရပ်တည်နေတာ။ ဘယ်လိုပဲ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေများလှတဲ့ အခန်းထဲမှာ ပျော်ပါးနေနေ တကယ်တမ်း မင်းဟာ မင်းပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ မင်းဟာ ဘဝကိုလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြတ်သန်းရမှာပါ။ အမြဲတမ်း၊ အမြဲတမ်းပေါ့
==> ကဲ.. ဘယ်လောက်တောင် အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလဲ? အက်ဒ်မင်တို့ကိုယ်တိုင်ရော သူပြောသလို မဟုတ်လို့လား.. မွေးကတည်းက တစ်ယောက်တည်း သေဆုံးသွားတဲ့ထိလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲလေ.. ဘယ်သူကများ နင်နဲ့တူတူသေမယ်လို့ ရှိလို့လဲ.. ရှင်သန်နေစဉ် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း မိတ်ဆွေစစ်နည်းနည်းလေးကလွဲလို့ အရာရာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလို့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ခဲ့ရတာ မဟုတ်လား…
၂။ အရွေ့ (Progress ) ဟုတ်လား? ကမ္ဘာမှာလေ အဲ့လို အရွေ့မျိုးဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာပဲ ရှိတယ်။ မင်းပဲ မြေကြီးတွေတူးဆွတယ်၊ မင်းပဲ မြို့ဆောက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒါအတွက် မင်းစစ်တိုက်တယ်။ မင်းက ဒါကိုများ အရွေ့လို့ ပြောချင်သေးသတဲ့လား?
==> အဲ.. ဒါလည်း ဟုတ်လား.. သူ့အလိုလို ဖြစ်လာတာကို ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှ မဟုတ်တာလေနော်.. တိုးတက်ဖို့၊ ဆုတ်ယုတ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားရတာမဟုတ်လား.. ပြောင်းလဲချိန်တန်ရင် ပြောင်းလဲရမယ်လေ 😛
၃။ ငါ့ကိုအထင်သေးစိတ်နဲ့ ကြည့်ရင် မင်း အရူးတစ်ယောက်ကို မြင်ရမယ်။ ငါ့ကို အထင်ကြီးတဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဘုရားသခင်ကို မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။ တည့်တည့်ကြည့်ရင်တော့ မင်းကိုယ်မင်း ပြန်မြင်ရမှာပါပဲ။
==> အထင်ကြီးခြင်း၊ အထင်သေးခြင်း၊ အားကျခြင်း၊ ဂုဏ်ယူခြင်း၊ အားငယ်ခြင်းတွေဖယ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လူတွေဟာ လူတွေပါပဲ။ ယောင်းမှာ စိတ်ကောင်းစေတနာလေးရှိသလို လူတိုင်းမှာလည်း စိတ်ကောင်းစေတနာရှိကြပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ အက်ဒ်မင့်မှာ စိတ်ပုပ်စိတ်ယုတ်တွေရှိသလို လူတိုင်းမှာလည်း ဒီစိတ်လေးက ကိန်းဝပ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းဟာအတူတူကြီးပဲပေါ့ ယောင်းရယ်.. ဒါနဲ့နည်းနည်း ဆင်တူသလိုရှိတဲ့ သူပြောတဲ့စကားလေးလည်းရှိတယ်ယောင်းရဲ့
မင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမုန်းတရားရှိနေသေးရင် ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း အမုန်းတရားတွေ ပြည့်နှက်နေဆဲပါပဲ တဲ့.. ဘယ်လောက်တောင် အဓိပ္ပာယ်ရှိလိုက်တဲ့ စကားလေးလဲလို့…
Related Article >>> သံမဏိ မိန်းမပျို သို့မဟုတ် လောကငရဲမှ လွတ်မြောက်လာသူ နာဒီယာ
၄။ မင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘုရားသခင်လို့ ခံယူပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘုရားသခင်လောက်အစွမ်းထက်တဲ့ အဆိုးရွားဆုံး မိစ္ဆာဟာလည်း မင်းပါပဲလို့ မှတ်သားပါ။ မင်းဟာ အရာအားလုံးဖြစ်သလို ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လည်းဖြစ်တယ်။
==> နည်းနည်းထူးဆန်းမယ်ထင်တယ်။ အက်ဒ်မင်ကတော့လေ ဒီလို ရိုးရိုးလေး ပြန်ပြောချင်တယ် ယောင်းရေ.. အောင်မြင်မှုရအောင်လည်း မင်းကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ်၊ ကျရှုံးအောင်လည်း မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တာပဲ။ မင်းလုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပဲလေ..
၅။ ငါ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ ငါ့ကိုယ်တွင်းမှာ မြင်လိုက်တဲ့အရာဟာ မင်းကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ တကယ်လို့ မင်းက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်သမားကြီးကို မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါ မင်းမြင်ချင်တဲ့ အရာပါပဲ။ နားလည်လား? တကယ်လို့များ မင်းက ငါ့ကို မင်းရဲ့ ညီအစ်ကိုလို မြင်ရင်တော့လည်း အဲ့ဒါလည်း ငါပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးက မင်းမှာမေတ္တာတရားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ငါဟာ မင်းပါပဲ။ ဒါကိုသာ မင်းလက်ခံလိုက်ရင် မင်းလွတ်လပ်သွားပြီလေ။ ငါကတကယ်တော့ မင်းအတွက် မှန်တစ်ချပ်ပါပဲ။
==> ဒါကတော့ လူတိုင်းရဲ့ အဇ္ဈတ္တသန္တန်အကြောင်းကို လိုရင်းတိုရှင်းပြောသွားတာပါယောင်းတို့ရေ.. ကိုယ်ချင်းစာ တရားနဲ့လည်း ဆိုင်သလို တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ဆိုသလိုပေါ့။
၆။ ငါငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကို ထက်မြက်ခဲ့တာ။ ပြီးတော့မှ ငါသိရတာက တုံးလွယ်တယ်ဆိုတာပဲ။
==> ငယ်ငယ်က အက်ဒ်မင်တို့ ယောင်းတို့ရဲ့ အတွေးတွေ အရမ်းကို လွတ်လပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြူလည်းဖြူစင်ခဲ့တယ်လေ.. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရောင်တွေအဆိုးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်၊ မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးမိပြီးတဲ့နောက် အက်ဒ်မင်တို့ရဲ့ စူးစမ်းစိတ်လေးတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလေးတွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာမဟုတ်လား… ကြီးလာလေ ဘောင်ထဲပိုရောက်လာလေ၊ အက်ဒ်မင်တို့ ပိုပြီးတုံးအလာလေပါပဲ။
၇။ တကယ်လို့များ ငါလူတစ်ယောက်ကို သတ်ချင်ခဲ့ရင် ဒီစာအုပ်လေးယူပြီး မင်းကို သေတဲ့ထိ ရိုက်ပစ်လိုက်ရုံပဲလေ။ ပြီးရင်တော့ ငါဘာတစ်ခုမှ ခံစားနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားသလို ခံစားချက်မျိုးလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။
==> ဒါတော့ လူတွေရဲ့ သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်းဟာ လောကသဘာဝနိယာမလို့ ဆိုလိုချင်ဟန်တူပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သွေးအေးမှုကိုလည်း ပြသွားနိုင်တဲ့ စကားပေါ့။
ယောင်းတို့တွေ စိတ်ဝင်စားလားတော့မသိဘူး။ အက်ဒ်မင်တော့ အဲ့ဘဲကြီးကို အရမ်းကြွေတာပဲ။ သူလူသတ်ခဲ့တာဟာ ၁၉၆၀များခုနှစ်တုန်းကပါ။ ခု ၂၀၁၇မှာတော့ ချားလ်စ် မန်ဆန် သေဆုံးခဲ့ပါပြီ။ သူ့ကိုတော့လေ အက်ဒ်မင်က လူဆိုးလို့လည်း မမြင်သလို လူကောင်းလို့လည်း မထင်ဘူး။ တည်ငြိမ်မှု လမ်းဆုံးရောက်နေတဲ့ လူထူးဆန်းတစ်ယောက်လို့ပဲမြင်တယ်။ ယောင်းတို့သာ စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရင် သိမှာပါ။ အက်ဒ်မင်ပြောချင်တာက ဂျိုကာလိုလူမျိုးပေါ့။ သူတို့က ရူးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တည်ငြိမ်မှု တစ်ဘက်စွန်းရောက်သွားတာပါ။ ဆိုတော့ ယောင်းရယ်.. ဗမာလို ရှင်းရှင်းပြောရရင် ထူးလည်းထူး၊ ရူးလည်းရူးတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့။ နောက်ထပ်လည်း ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာမှုခင်းတွေအကြောင်း တစ်ပတ်တစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ စောင့်ကြည့်ကြပါဦးနော် ယောင်းတို့..
Libra ( For Her Myanmar )
Reference :Biography , All That Interesting , Ranker
သူတှေးတဲ့ အတှေးနဲ့ သူပွောတဲ့စကားတှကွေောငျ့ ကိုယျပါသူ့ဂိုဏျးဝငျခငျြသှားသောအခါ…
ယောငျးတို့ရေ.. ဟိုးတဈခေါကျက အကျဒျမငျ ကမ်ဘာ့အခြောဆုံး လူသတျသမားမြားဆိုပွီး Video လေးလုပျထားတာ ကွညျ့လိုကျရလား? မကွညျ့ရသေးရငျ ဒီမှာ ကွညျ့နျော… အဲဒီထဲမှာ အကျဒျမငျက စိတျဝငျစားစရာလူတဈယောကျကိုတှတေ့ယျယောငျးတို့ရဲ့.. လူသတျသမားမြား ဘာစိတျဝငျစားစရာကောငျးလို့လဲတော့ အပွောမစောနဲ့ ယောငျးရေ.. စိတျဝငျစားစရာအကွောငျးလေးတှကေို အကျဒျမငျပွောပွမယျ 😉
သူ့နာမညျကိုတော့ Charles Manson လို့ချေါပါတယျ။ Charles Manson ကို ၁၉၃၄ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ ငယျငယျကတော့ ခပျခြောခြော၊ ခပျမိုကျမိုကျ ဘဲလေးပေါ့… ကမ်ဘာ့ဆှဲဆောငျမှု အရှိဆုံး လူသတျသမားစာရငျးထဲတောငျ ပါသေး… သူက တခွားလူသတျသမားတှလေို မုဒိမျးကငျြ့ လူသတျတာမြိုးမဟုတျဘဲ သူ့အစား တခွားလူတှကေ သတျပေးတာတဲ့ ယောငျးတိုရဲ့… သတျပေးဆို သူက ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျကိုး ဟီးဟီး.. သူ့ဂိုဏျးသားတှေ သတျပဈလိုကျတဲ့ လူတှမြေားလှနျးတာမို့ နောကျဆုံး ရလဒျက သူ ထောငျထဲမှာ တဈသကျစာ နလေိုကျရတာပါကှယျ.. သူ့ဂိုဏျးနာမညျကိုတော့ Manson Family Cult (မနျဆနျမိသားစု ဂိုဏျး) လို့ချေါပါတယျ.. သူ့ဂိုဏျးသားတှနေဲ့အတူ သစေလေောကျတဲ့ ကမျးပိနျးတှလေညျး အမြားကွီးလုပျခဲ့တာပေါ့။ ဒါကွောငျ့လညျး သူက ရာဇဝတျမှုသမိုငျးမှာ သိပျကို နာမညျကြျောကွား ထငျရှားခဲ့တာပေါ့။
The Family ( Manson Family Cult) မှာတော့ ခြားလျဈမနျဆနျရဲ့ နောကျလိုကျပေါငျး ၁၀၀ကြျော ရှိပါတယျ။ ခြားလျဈ မနျဆနျရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဘဝနနေညျးပုံစံတှေ၊ စှဲလမျးမူးယဈပွီး ထငျယောငျထငျမှားဖွဈစတေဲ့ ဆေးသုံးစှဲမှုတှကေို အားလုံးလိုကျလုပျခဲ့ကွပါတယျတဲ့။ ဒီလူတှထေဲမှာ မိနျးကလေး ငယျငယျလေးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့အားလုံးဟာ မနျဆနျကို ယရှေုဖွဈတယျ၊ ဘုရားသခငျဖွဈတယျလို့ ခွှငျးခကျြမရှိ ယုံကွညျလကျခံထားကွပွီး သူပွောတဲ့စကားကို ဗြာဒိတျတှလေို၊ အမိနျ့တဈခုလို ရိုရိုကြိုးကြိုး နာခံကွတာပါ။
ဒီမိသားစုလို့ချေါရမယျ့ ဂိုဏျးဟာ လူသတျမှုပေါငျး ၃၅ခုလောကျကို ကြူးလှနျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလူသတျမှုတှကေို ဘယျတုနျးကမှဖျောလို့မရခဲ့ပါဘူး။ သဲလှနျစမကနျြတာက တဈကွောငျး၊ အဲ့လို သတျလိုကျတာတှကေို မနျဆနျက သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့သူ ဖွရှေငျးလိုကျတာက တဈကွောငျးပေါ့လေ.. သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး သားကောငျဖွဈသှားသူတှကေတော့ သူတို့ဟာ မနျဆနျကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ မိသားစုတဈခုလုံးအသတျခံလိုကျရတာပါ။ တကယျ့လူသတျမှုထဲမှာ ခြားလျဈ မနျဆနျက ထဲထဲဝငျဝငျမပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ သူ့နောကျလိုကျတှကေို တှသေ့မြှလူ အကုနျသတျဆိုတဲ့ အမိနျ့နဲ့ ခိုငျးစလေိုကျတာပါတဲ့။
စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာကို ဒီက စပွောရမယျ ယောငျးတို့ရေ… စောစောက အကျဒျမငျပွောခဲ့သမြှ ခြားလျဈ မနျဆနျရဲ့ အကွောငျးတှကေ ရူးကွောငျကွောငျနိုငျတယျ ထငျရတယျဟုတျ? ဥပမာ သူက ဘုရားသခငျဖွဈတယျတို့ ဘာတို့လေ.. အဲ့တော့ ဒီအကောငျကွီးက ရူးနတေဲ့ကောငျကွီးလားပေါ့.. အကျဒျမငျတို့ဆီမှာလညျး ဒါမြိုးက ရှိတယျမလား.. (ပွောတော့ ပွောရဲပါဘူး 😀 တို့မထိရဲပု 😛 ) ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ အတှေးအချေါတှေ အပွောအဆိုတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ အဓိပ်ပာယျရှိလှနျလှနျးလို့ ပါးစပျပါ အဟောငျးသားဖွဈရတယျ ယောငျးတို့ရေ.. အဲ့လိုတှထေဲကမှ အကျဒျမငျသဘောကတြဲ့ သူပွောသှားတဲ့ စကားလေးတှကေို ပွောပွမယျနျော… တကယျလို့မြားသာ ယောငျးက သူ့ရှမှေ့ာ သူပွောတာတှေ ထိုငျနားထောငျရမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးလညျး သူ့ဂိုဏျးဝငျဖွဈသှားမှာပါတဲ့.. အငျးပေါ့လေ.. ဒါကွောငျ့လညျး နောကျလိုကျတှေ မြားတာပေါ့။ အကျဒျမငျတောငျ သူ့အတှေးလေးတှေ သဘောကခြငျြခငျြ…
Related Article >>> လူသတျမှုအပွဈဒဏျအနနေဲ့ မိနျးကလေးတှကေို လြျောကွေးအဖွဈပေးရတဲ့ Pashtun လူမြိုးစု
၁။ မငျးတို့အားလုံးဟာ ကိုယျ့အတှကျပဲ ကိုယျ ကွညျ့ကွတာပါ။ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ရပျတညျနတော။ ဘယျလိုပဲ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှမြေားလှတဲ့ အခနျးထဲမှာ ပြျောပါးနနေေ တကယျတမျး မငျးဟာ မငျးပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ မငျးဟာ ဘဝကိုလညျး တဈယောကျတညျးပဲ ဖွတျသနျးရမှာပါ။ အမွဲတမျး၊ အမွဲတမျးပေါ့
==> ကဲ.. ဘယျလောကျတောငျ အဓိပ်ပာယျရှိတဲ့စကားလဲ? အကျဒျမငျတို့ကိုယျတိုငျရော သူပွောသလို မဟုတျလို့လား.. မှေးကတညျးက တဈယောကျတညျး သဆေုံးသှားတဲ့ထိလညျး တဈယောကျတညျးပဲလေ.. ဘယျသူကမြား နငျနဲ့တူတူသမေယျလို့ ရှိလို့လဲ.. ရှငျသနျနစေဉျ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာလညျး မိတျဆှစေဈနညျးနညျးလေးကလှဲလို့ အရာရာ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးလို့ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျခဲ့ရတာ မဟုတျလား…
၂။ အရှေ့ (Progress ) ဟုတျလား? ကမ်ဘာမှာလေ အဲ့လို အရှမြေို့းဆိုတာ ဘယျတုနျးကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ပွောငျးလဲမှုဆိုတာပဲ ရှိတယျ။ မငျးပဲ မွကွေီးတှတေူးဆှတယျ၊ မငျးပဲ မွို့ဆောကျတယျ၊ ပွီးတော့ ဒါအတှကျ မငျးစဈတိုကျတယျ။ မငျးက ဒါကိုမြား အရှလေို့ ပွောခငျြသေးသတဲ့လား?
==> အဲ.. ဒါလညျး ဟုတျလား.. သူ့အလိုလို ဖွဈလာတာကို ထိုငျစောငျ့နခေဲ့ရတဲ့ကိစ်စတှမှေ မဟုတျတာလနေျော.. တိုးတကျဖို့၊ ဆုတျယုတျဖို့ဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ကွိုးစားရတာမဟုတျလား.. ပွောငျးလဲခြိနျတနျရငျ ပွောငျးလဲရမယျလေ 😛
၃။ ငါ့ကိုအထငျသေးစိတျနဲ့ ကွညျ့ရငျ မငျး အရူးတဈယောကျကို မွငျရမယျ။ ငါ့ကို အထငျကွီးတဲ့စိတျနဲ့ ကွညျ့ရငျတော့ ဘုရားသခငျကို မငျးတှရေ့လိမျ့မယျ။ တညျ့တညျ့ကွညျ့ရငျတော့ မငျးကိုယျမငျး ပွနျမွငျရမှာပါပဲ။
==> အထငျကွီးခွငျး၊ အထငျသေးခွငျး၊ အားကခြွငျး၊ ဂုဏျယူခွငျး၊ အားငယျခွငျးတှဖေယျကွညျ့လိုကျပါ။ လူတှဟော လူတှပေါပဲ။ ယောငျးမှာ စိတျကောငျးစတေနာလေးရှိသလို လူတိုငျးမှာလညျး စိတျကောငျးစတေနာရှိကွပါတယျ။ အဲ့လိုပဲ အကျဒျမငျ့မှာ စိတျပုပျစိတျယုတျတှရှေိသလို လူတိုငျးမှာလညျး ဒီစိတျလေးက ကိနျးဝပျနပေါတယျ။ လူတိုငျးဟာအတူတူကွီးပဲပေါ့ ယောငျးရယျ.. ဒါနဲ့နညျးနညျး ဆငျတူသလိုရှိတဲ့ သူပွောတဲ့စကားလေးလညျးရှိတယျယောငျးရဲ့
မငျးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမုနျးတရားရှိနသေေးရငျ ကမ်ဘာကွီးမှာလညျး အမုနျးတရားတှေ ပွညျ့နှကျနဆေဲပါပဲ တဲ့.. ဘယျလောကျတောငျ အဓိပ်ပာယျရှိလိုကျတဲ့ စကားလေးလဲလို့…
Related Article >>> သံမဏိ မိနျးမပြို သို့မဟုတျ လောကငရဲမှ လှတျမွောကျလာသူ နာဒီယာ
၄။ မငျးဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘုရားသခငျလို့ ခံယူပါ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဘုရားသခငျလောကျအစှမျးထကျတဲ့ အဆိုးရှားဆုံး မိစ်ဆာဟာလညျး မငျးပါပဲလို့ မှတျသားပါ။ မငျးဟာ အရာအားလုံးဖွဈသလို ဘာမှမဟုတျတဲ့ကောငျလညျးဖွဈတယျ။
==> နညျးနညျးထူးဆနျးမယျထငျတယျ။ အကျဒျမငျကတော့လေ ဒီလို ရိုးရိုးလေး ပွနျပွောခငျြတယျ ယောငျးရေ.. အောငျမွငျမှုရအောငျလညျး မငျးကိုယျတိုငျ လုပျရမယျ၊ ကရြှုံးအောငျလညျး မငျးကိုယျတိုငျလုပျတာပဲ။ မငျးလုပျလိုကျတဲ့ အလုပျရဲ့ အသီးအပှငျ့တှပေဲလေ..
၅။ ငါ့ကိုကွညျ့လိုကျလို့ ငါ့ကိုယျတှငျးမှာ မွငျလိုကျတဲ့အရာဟာ မငျးကိုယျတိုငျပါပဲ။ တကယျလို့ မငျးက ရကျစကျကွမျးကွုတျတဲ့ လူသတျသမားကွီးကို မွငျမယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒါ မငျးမွငျခငျြတဲ့ အရာပါပဲ။ နားလညျလား? တကယျလို့မြား မငျးက ငါ့ကို မငျးရဲ့ ညီအဈကိုလို မွငျရငျတော့လညျး အဲ့ဒါလညျး ငါပါပဲ။ ဒါတှအေားလုံးက မငျးမှာမတ်ေတာတရားဘယျလောကျရှိတယျဆိုတဲ့ပျေါ မူတညျပါတယျ။ ငါဟာ မငျးပါပဲ။ ဒါကိုသာ မငျးလကျခံလိုကျရငျ မငျးလှတျလပျသှားပွီလေ။ ငါကတကယျတော့ မငျးအတှကျ မှနျတဈခပျြပါပဲ။
==> ဒါကတော့ လူတိုငျးရဲ့ အဇ်ဈတ်တသန်တနျအကွောငျးကို လိုရငျးတိုရှငျးပွောသှားတာပါယောငျးတို့ရေ.. ကိုယျခငျြးစာ တရားနဲ့လညျး ဆိုငျသလို တရားရှာ ကိုယျမှာတှဆေို့သလိုပေါ့။
၆။ ငါငယျငယျတုနျးက အရမျးကို ထကျမွကျခဲ့တာ။ ပွီးတော့မှ ငါသိရတာက တုံးလှယျတယျဆိုတာပဲ။
==> ငယျငယျက အကျဒျမငျတို့ ယောငျးတို့ရဲ့ အတှေးတှေ အရမျးကို လှတျလပျခဲ့ပါတယျ။ ဖွူလညျးဖွူစငျခဲ့တယျလေ.. ပတျဝနျးကငျြရဲ့အရောငျတှအေဆိုးခံလိုကျရပွီးတဲ့နောကျ၊ မဖွနေိုငျတဲ့ မေးခှနျးတှကေို မေးမိပွီးတဲ့နောကျ အကျဒျမငျတို့ရဲ့ စူးစမျးစိတျလေးတှေ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုလေးတှေ ရိုကျခြိုးခံလိုကျရတာမဟုတျလား… ကွီးလာလေ ဘောငျထဲပိုရောကျလာလေ၊ အကျဒျမငျတို့ ပိုပွီးတုံးအလာလပေါပဲ။
၇။ တကယျလို့မြား ငါလူတဈယောကျကို သတျခငျြခဲ့ရငျ ဒီစာအုပျလေးယူပွီး မငျးကို သတေဲ့ထိ ရိုကျပဈလိုကျရုံပဲလေ။ ပွီးရငျတော့ ငါဘာတဈခုမှ ခံစားနမှောမဟုတျပါဘူး။ ဆေးဆိုငျတဈဆိုငျထဲ ဝငျသှားသလို ခံစားခကျြမြိုးလောကျပဲ ရှိမှာပါ။
==> ဒါတော့ လူတှရေဲ့ သခွေငျး၊ ရှငျခွငျးဟာ လောကသဘာဝနိယာမလို့ ဆိုလိုခငျြဟနျတူပါတယျ။ သူ့ရဲ့ သှေးအေးမှုကိုလညျး ပွသှားနိုငျတဲ့ စကားပေါ့။
ယောငျးတို့တှေ စိတျဝငျစားလားတော့မသိဘူး။ အကျဒျမငျတော့ အဲ့ဘဲကွီးကို အရမျးကွှတောပဲ။ သူလူသတျခဲ့တာဟာ ၁၉၆၀မြားခုနှဈတုနျးကပါ။ ခု ၂၀၁၇မှာတော့ ခြားလျဈ မနျဆနျ သဆေုံးခဲ့ပါပွီ။ သူ့ကိုတော့လေ အကျဒျမငျက လူဆိုးလို့လညျး မမွငျသလို လူကောငျးလို့လညျး မထငျဘူး။ တညျငွိမျမှု လမျးဆုံးရောကျနတေဲ့ လူထူးဆနျးတဈယောကျလို့ပဲမွငျတယျ။ ယောငျးတို့သာ စူပါဟီးရိုးဇာတျကားတှေ ကွညျ့ရငျ သိမှာပါ။ အကျဒျမငျပွောခငျြတာက ဂြိုကာလိုလူမြိုးပေါ့။ သူတို့က ရူးနတောမဟုတျပါဘူး။ တညျငွိမျမှု တဈဘကျစှနျးရောကျသှားတာပါ။ ဆိုတော့ ယောငျးရယျ.. ဗမာလို ရှငျးရှငျးပွောရရငျ ထူးလညျးထူး၊ ရူးလညျးရူးတဲ့လူမြိုးတှပေေါ့။ နောကျထပျလညျး ဒီလို စိတျဝငျစားစရာမှုခငျးတှအေကွောငျး တဈပတျတဈပုဒျတငျဆကျပေးဦးမှာမို့ စောငျ့ကွညျ့ကွပါဦးနျော ယောငျးတို့..
Tags: Charles Manson, crime, Knowledge, Quotes, Serial Killer
သူ့လောက် ကံဆိုးတဲ့သူ ရှိမယ်မထင် (၁)
Gym ဆော့တာရပျလိုကျရငျ ဝလာမှာလား?
Nilar April 3, 2018